Ukusatshalaliswa kwe-Anaconda: I-Suite Ephelele Kunayo Yonke Yesayensi Yezedatha enePython | Kusuka kuLinux
Luigys toro | | Aplicaciones, Ukuhlela
Ezinsukwini zokugcina bengifunda futhi ngizijwayeza ukujula kakhulu Ulimi lohlelo lwePython esikhulume ngakho kubhulogi kaninginingi, isizathu esiyinhloko ngukuthi nginemiqondo eminingana engifuna ukuyicacisa futhi ehlose shintsha izinqubo ku-Linux kepha lokho kungakala kwezinye izinhlelo ezisebenzayo.
Lonke lolu cwaningo lunginike ithuba lokuhlangana nolusha amathuluzi, amaqhinga, nemithetho ezoba wusizo kakhulu kubahleli bohlelo lwePython, ngakho-ke ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo kungenzeka ukuthi sabelane ngezihloko eziningana ezihlobene nalolu limi oluhle futhi olunamandla lokuhlela.
Ukusatshalaliswa kwe-Anaconda ingenye yalawo mathuluzi engicabanga ukuthi kufanele abe isisekelo salolu chungechunge lwezihloko, ngoba ngiyabheka iSuite ephelele kakhulu yeDatha Yesayensi enePython nokuthi isinikeza inani elikhulu lezinto ezizosebenza ezizosivumela ukuthi sithuthukise izinhlelo zokusebenza ngendlela esheshayo, esheshayo futhi elula.
3 Ungayifaka kanjani i-Anaconda Distribution?
Anaconda Kuyinto a I-Open Source Suitenoma lokho kufaka uchungechunge lwezicelo, imitapo yolwazi kanye nemiqondo eyenzelwe ukuthuthukiswa kwe- Idatha Yesayensi enePython. Kumugqa ojwayelekile u-AUkusabalalisa kwe-naconda kungukusatshalaliswa kwe-Python okusebenza njengomphathi wezemvelo, umphathi wephakeji futhi kuneqoqo le- ngaphezu kwamaphakheji womthombo ovulekile angama-720.
I-Anaconda Distribution ihlelwe yaba imikhakha emi-4 noma izixazululo zobuchwepheshe, I-Anaconda Navigator, Iphrojekthi ye-Anaconda, The imitapo yolwazi yesayensi y UConda. Zonke lezi zifakwe ngokuzenzakalela futhi ngenqubo elula kakhulu.
Lapho sifaka i-Anaconda sizoba nawo wonke la mathuluzi asevele elungisiwe, singakwazi ukuwaphatha ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sokuqhafaza se-Navigator noma singasebenzisa uConda ukuphatha nge-console. Ungafaka, ususe noma uvuselele noma iyiphi iphakethe le-Anaconda ngokuchofoza okumbalwa ku-Navigator noma ngomyalo owodwa ovela kuConda.
Le Suite yeDatha Yesayensi enePython inenombolo enkulu yezici, phakathi kwazo esingagqamisa okulandelayo:
Umthombo wamahhala, ovulekile, onemibhalo enemininingwane eminingi nomphakathi omuhle.
I-Multiplatform (i-Linux, i-MacOS ne-Windows).
Ikuvumela ukuthi ufake futhi uphathe amaphakheji, ukuncika kanye nezindawo zesayensi yedatha ngePython ngendlela elula kakhulu.
Siza ukuthuthukisa amaphrojekthi wesayensi yedatha usebenzisa ama-IDE ahlukahlukene njengeJupyter, JupyterLab, Spyder, neRStudio.
Inamathuluzi afana no-Dask, numpy, pandas noNumba wokuhlaziya iDatha.
Ivumela ukubona ngeso lengqondo idatha ngeBokeh, Datashader, Holoviews noma iMatplotlib.
Izinhlobonhlobo zezicelo ezihlobene namamodeli wokufunda nokufunda komshini.
I-Anaconda Navigator iyisixhumi esibonakalayo somsebenzisi esilula se-GUI kepha esinamandla amakhulu.
Ungaqhubekisela phambili amaphakheji ahlobene nesayensi ngePython kusuka ku-terminal.
Inikeza amandla okufinyelela kuzinsizakusebenza zokufunda ezithuthuke kakhulu.
Susa ukukhishwa kwephakheji nezinkinga zokulawula inguqulo.
Inamathuluzi akuvumela ukuthi wakhe futhi wabelane ngamadokhumenti aqukethe ikhodi ngokuhlanganiswa bukhoma, izibalo, izincazelo nezichasiselo.
Ikuvumela ukuthi uhlanganise i-Python ibe yikhodi yomshini yokwenza ngokushesha.
Isiza ekubhalweni kwama-algorithms ayindida afanayo okwenza imisebenzi.
Inokusekelwa kwekhompyutha esebenza kahle kakhulu.
Amaphrojekthi ayaphatheka, akuvumela ukuthi wabelane ngamaphrojekthi nabanye futhi uqalise amaphrojekthi kuzingxenyekazi ezahlukahlukene.
Ngokushesha yenza lula ukuqaliswa kwamaphrojekthi wesayensi yedatha.
Ungayifaka kanjani i-Anaconda Distribution?
Ukufaka i-Anaconda Distribution kulula kakhulu, vele uye kufayela le- Isigaba sokulanda se-Anaconda Distribution bese ulanda inguqulo oyifunayo (i-Python 3.6 noma i-Python 2.7). Kanye ukulandwa, sivula ukuphela, siye enkombeni ehambisanayo bese senza umzamo wokufaka ngenguqulo ehambisanayo.
Faka esikhundleni igama le-bash elilandiwe
Ngemuva kwalokho kufanele sicindezele enter ukuqhubeka, samukela ilayisense nge yes, siqinisekisa umkhombandlela lapho sizofaka khona i-Anaconda futhi ekugcineni sikhethe yes ukuze i-Anaconda ize kuqala kunePython yomshini.
Kusuka esigungwini sisebenzisa i-Anaconda Navigator nge anaconda-navigator futhi singaqala ukujabulela ithuluzi njengoba kubonakala kugalari elandelayo.
Ngendlela efanayo, ungasebenzisa okulandelayo Uhlu lomyalo kaConda lokho kuzokuvumela ukuthi ufake futhi uphathe amaphakheji ngendlela eshesha kakhulu.
Le Tool Suite yenzelwe iData Science ngePython kodwa ilusizo kubathuthukisi abaningi be-python, Inenombolo enkulu yezicelo namaphakeji azosivumela ukuthi sisebenze kangcono.
Amaphakeji amaningi nezinsiza ezikhona ku-Anaconda Distribution zizohlolwa ngokuningiliziwe ezindabeni ezahlukahlukene esizokushicilela, ngiyethemba le ndawo inesithakazelo kuwe futhi ungakhohlwa ukusishiya imibono yakho nokuphawula kwakho ngayo kumazwana.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ukusatshalaliswa kwe-Anaconda: I-Suite Ephelele Kunayo Yonke Yesayensi Yezedatha enePython
UJorge Alvarez kusho
Ku-Windows uma i-Anaconda, kepha ku-Linux ngihlale ngibona kulula ukuyifaka kusuka kumadiphozithi, ihlanganiswe kakhulu ohlelweni, kulula ukuyifaka. Okungenani ukusetshenziswa kwama-pandas, numpy kanye ne-Jupyter Notebook eyisisekelo engikunikeza yona angibanga nezinkinga
Phendula uJorge Álvarez
U-Edwin Enrique Vargas kusho
I-Lizard enhle kakhulu!
Phendula u-Edwin Enrique Vargas
UThaizir El Troudi kusho
Ngabe kunconyelwe thina esiqala ku-python?
Phendula uThaizir El Troudi
Kunconyelwe kakhulu labo abaqala ku-python, kunethuluzi elibizwa nge-jupyter notebook elifakwe ne-Anaconda Distribution futhi engicabanga ukuthi ilungele ukufunda nokuthatha amanothi ku-python… Maduze sizoba nendatshana ngaleli thuluzi.
sawubona angikwazi ukusebenzisa i-anaconda-navigator ku-terminal
UFabio Gaviria kusho
kufanele ubeke lokhu okokuqala kuphela okokuqala bevula:
$ umthombo ~ / .bashrc
Futhi-ke uma beyivula ngokujwayelekile njengoba ibonakala ngaphezulu.
Phendula uFabio Gaviria
Umbuzo, siyini isiteshi sethelegramu se-desdelinux ???
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu, ebengikufuna angikutholanga lutho
Njengamanje asinayo inkinga yokuphatha, kepha sicabanga ukuba nayo ngokushesha okukhulu. Ukuze umphakathi uhlangane.
Ngifake i-Anaconda3 kuLinuxMint 18.2 ngivula ispyder bese ngithola ukuthi ingivumela kuphela ukufinyelela i-hard drive yami. Awuyiboni i-USB. Ngingayilungisa kanjani le nketho? Ozithobayo
Ama-Virtual Machines kusho
Isifundo esihle. Ngidale umshini weLubuntu + Anaconda onakho konke okulungele ukuhamba.
Ngiyabelana ngayo uma kungenzeka kube wusizo: https://github.com/Virtual-Machines/Anaconda-VirtualBox
Phendula Kumishini Ebonakalayo